Invest Property - Find Property
ကြိုပွိုင့် - တိုက်ခန်း - တောင်ဥက္ကလာ
( 2019 / 1 ) လပိုင်းတွင် တည်ဆောက်မှုစတင်မည့် တိုက်တွင် အတိုးမဲ့အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးသည်။ဧည့်ခန်...
ကြိုပွိုင့် - တိုက်ခန်း - သာကေတ
သာကေတမြို့နယ်( 8 )ရပ်ကွက်/ရွှေအုတ်ဂူ( 4လမ်း) ( အမှတ်/712 ) တွင်ရှိသော hall , ရေချိုးခန်း အိမ်သာ မီးဖ...
သာကေတမြို့နယ်( 8 )ရပ်ကွက်/ရွှေအုတ်ဂူ( 4လမ်း) ( အမှတ်/712 )တွင်ရှိသော hall , ရေချိုးခန်း အိမ်သာ မီးဖ...
အိပ်ခန်း(2) ခန်းပါဝင်ခြင်း -ဧည့်ခန်းနှင့် အိပ်ခန်းများကိုရီးယားပါကေးခင်းပေးခြင်း -မျက်နာကျက်အလှဆင်...
ကြိုပွိုင့် - မြေကွက် ၊ ခြံ - မရမ်းကုန်း
စိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်လေးမှာ ကိုယ်ပိုင်လုံးချင်းနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို...
မြေကွက် ၊ ခြံ
ကြိုပွိုင့် - လုံးချင်းအိမ် - မြောက်ဥက္ကလာ
0?Swimming Pool ၊ အဆင့်မြင့် Club Houseပါရှိတဲ့ ရွှေပေါက်ကံ VIP ရပ်ကွက် အဆင့်မြင့်လုံးချင်းအိမ်ရာ&...
ကြိုပွိုင့် - ကွန်ဒို -
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ UBC Condo အခန်းများကိ...
? သိန်း (1100) ကျော်ခန့်ဖြင့် သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်ရှိ? သုဝဏ္ဏ ​ဘောလုံးကွင်း ၊ ILBC ၊...
ကြိုပွိုင့် - ကွန်ဒို - လှိုင်
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ 25% ပေးချေရုံဖြင့် မြကန်သ...
?၂၅% ​ပေး​ချေရုံဖြင့်​ အခန်းလက်​​ရောက်​ရရှိမည့်​ ? လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ? မြကန်သာအိမ်...
လှိုင်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Royal Thukha Condo က...
လှိုင်မြို့နယ် ရှိ အင်းစ်ိန်လမ်း ၊ ဗဟိုလမ်းနှင့် ပါရမီလမ်း တို့ကို အလွယ်တကူ သွားလာနိုင် သည့်အပြင်&...